Isamsung iya kusebenzisa izikrini ze-LCD kwiGalaxy A | I-Androidsis
Kwiiveki bekukho intetho malunga notshintsho olwaziswa yiSamsung kwiifowuni zayo. Ifemu yaseKorea izakutshintsha amanye amabakala ayo, Ukongeza ekupheliseni ezinye zazo. Kwakhona ngaphakathi kwamanqanaba kulindeleke ukuba utshintsho kwiimpawu zeefowuni. Enye yazo yile yeGlasi A, eyeyaphakathi kuluhlu kwaye amanye amatyala e-premium-premium avela kwinkampani yaseKorea. Kodwa ngesiqhelo ixabiso layo liphezulu.
Esinye sezizathu zoku kukuba inkampani yaseKorea isebenzisa izikrini ze-AMOLED kuzo. Ngelixa le iyinto ebanike uvuyo olukhulu, ithatha ukuba ixabiso lefowuni liphezulu. Kwaye i-Samsung ibonakala izimisele ukwehlisa ixabiso lale Galaxy A, Ukuguqula iteknoloji abayisebenzisayo kwipaneli.
Endaweni yokusebenzisa i Itekhnoloji yesiqhelo ye-AMOLED Kuzo, inkampani izakuqala ukusebenzisa iLCD kuzo. Itekhnoloji ethe ngcu ephantsi, kwaye inexabiso eliphantsi. Into eza kucinga Iifowuni ezikolu luhlu lwe-Samsung Galaxy A ziya kuba zitshiphu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuhla kwexabiso kolu luhlu Kungathetha ukuba ukuthengisa kwakho kuya kuphucula. Into ephambili, kuba nangona ifemu igcina indawo yayo yokuqala kwintengiso yemfonomfono, ukuthengisa kwayo kuyehla kulo nyaka, cngeemveliso ezinjengeHuawei zisondela nangakumbi.
Isamsung kulindeleke ukuba yazise olu tshintsho kuluhlu lwayo lweGalaxy A kunyaka olandelayo. Eyona nto inokwenzeka kukuba Iimodeli ezintsha ezingena kuyo sele zinepaneli yeLCD. Ayizukuba luluhlu kuphela lwenkampani apho kungeniswa khona utshintsho, kodwa okwangoku ayaziwa ngokuchanekileyo ukuba amabakala aya kuhlengahlengiswa njani, okanye ukukhutshwa kwawo ngokusemthethweni.
Ucinga ntoni ngolu tshintsho lwenziwe yiSamsung? Ngaba iya kunceda ukuphucula ukuthengisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy A iya kusebenzisa izikrini ze-LCD
Ngaba i-WhatsApp iyakuyicima imiyalezo yakho ngo-Novemba 12?